Bocorka weyn | December 2019
Kala duwan ee bocorka ballaaran: sharaxaad iyo sawir noocyo caan ah
Ugu Weyn Ee Bocorka weyn
Pumpkin waa shey gaar ah, oo aan lagama maarmaan u tahay ilmaha iyo cuntada cuntada, dukaanka nafaqooyinka, fiitamiinada iyo miiqyada. Dhulkeena, saddex nooc oo bocorka ah ayaa badanaa lagu beeraa: cidhiidhiga, lowska iyo ballaadhan-weyn. Waxay kala duwan yihiin waxayna ku xiran tahay dhadhanka qashinka, xajmiga miro iyo jilicsanaanta maqaarka.
Horumarinta lagenarii ee beerta: beerto iyo daryeelidda ubbada dhalada
Warshad leh magac aan caadi ahayn wuxuu leeyahay ugu yaraan alaab aan caadi ahayn. Waxaa loo adeegsadaa ma aha oo kaliya cuntada, miraha waxaa laga saaraa qaybo, laakiin iyaga qudhoodu waxay leeyihiin qaabab aan caadi ahayn. Ma aha beerta beerta oo idil ka qaadato beerashada of lagenaria, oo aan cid waliba ogayn waxa ay tahay. Laakiin natiijooyinka shaqadu marwalba waa la yaabay. Lagenaria: sharaxaadda dhaqanka dad badan ayaa ogaanaya Lagenaria magacyo kale: Zucchini Vietnam, qajaar khabiir ah, qajaar, khudradda, dhalada caleenta iyo kuwa kale.
Sidee, goorma iyo sida loola beego yaanyada dhulka hoostiisa
Dharka xawaashka loogu talagalay basbaas, sida bacriminta khudradda si sax ah u
Ophiopogon waa geedo lagu beeray beerta iyo guriga. Meelaha leh qaboobaha khafiifka ah iyo daboolka barafka oo ku filan, xilliga qaboobaha ee sanadka ayaa si fudud u dulqaadan kara, laakiin wuxuu qaboojin karaa -20 ° C, haddii hoygu aanu ku filneyn. Sidaa daraadeed, marar badan ayaa loo arkaa sidii guri guri. Read More
Quruxda gurigaaga! Sidee loola gooyaa qolka hydrangea guriga?
Waxyaabaha kala duwan ee tufaaxa leh maadada sare ee fiitamiin - Uspensky
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Bocorka weyn 2019